Cabdi Xaashi, Guddoomiyaha Jaaliyadda Galmudug, oo Daljir u warramay (dhegayso) – Radio Daljir
Cabdi Xaashi, Guddoomiyaha Jaaliyadda Galmudug, oo Daljir u warramay (dhegayso)
Oktoobar 7, 2018 7:08 g 0
Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa ka falaanqooday xaaladda gobolka Mudug, siiba Gaalkacyo, iyo nabadda dhawaan deegaanka ka islaaxday. Cabdi Xaashi ayaa farta ku fiiqay in al-Shabaab ay magaalada Gaalkacyo iyo Gobolka Mudud ka agdhowdahay, qaybna ka tahay in dadkaan wada dashay aan nabadi dhexmarin.
Cabdi Xaashi ayaa ku gubaabiyey in labada maamul ay yeeshan maamul mideysan, ciidan mideysan iyo waxbarasho mideysan, oo aan marna la kala qaybsanaan. “Waa in la joojiyo oo laga hortago dadka baadda maalin kasta ka qaada dadka deegaanka,” ayuu ku soo gabagabeeyey Guddoomiye Cabdi Xaashi.
Waxaa waraystay Jamaal Faarax Aadan, Daljir Gaalkacyo.
Warka Fiidnimo, Xuseen Xadaari, Daljir Gaalkacyo (dhegayso/daawo)